Ogaden News Agency (ONA) – Doolaal ayaa soo ururuiyay ganacsatada Somaliyeed ee qunsiliyadda Itoobiya ay shirisay – Ceelaabe
Doolaal ayaa soo ururuiyay ganacsatada Somaliyeed ee qunsiliyadda Itoobiya ay shirisay – Ceelaabe
Nin Somaali ah oo magaciisa ku soo koobay Ceelaabe ayaa warkan nooga soo diray Dubai oo yidhi; Qunsiliyadda Itoobiya ee dalka Imaaraadka ayaa shir u qabatay ganacsatada iyo xubnaha kale ee Jaalliyadda Somalida ee ku dhaqan dalka Imaaraadka. Shirkaas oo aan la fahamsanayn sababta qunsiliyaddu ay u dooratay inay shir u qabato jaalliyadda Somalida ah iyadoo aan wax shir ah loogu yeedhin jaalliyadda Itoobiyaanka ee dalka deggan.
Waxaa dalka Imaaraadka ku suganaa maalmahan ninka Dawladda Itoobiya wakiilka uga ah Dalka Ogaadenya oo lagu magacaabo Abdi Maxamuud Cumar loose yaqaano Abdi Ileey. Booqashada uu Abdi Iley ku joogo imaaraadka ayaa iyada nafteeda aan la fahmnin isagoo maalmihii hore ka dhuumanayey bulshada xitaa taageerayaashiisa.
Jaalliyadda Soomalida Ogaadenya ayaan lagu martiqaadin shirka. Waxaa yaab ahayd markii labo qoys oo daris ah oo midna yahay ree Muqdisho midna ka soo jeedo Ogaadenya, la martiqaaday midkii ree Muqdisho kii ree Ogaadenyana la garab maray. Markii su’aalo badan soo baxeen ayaa dad yar oo la xulay laga martiqaaday jaaliyadda Ogaadenya.
Shirka waxaa furay qunsulka dawladda Itoobiya, ka dibna waxaa hadal kooban jeediyey Abdi Ileey. Hadal aad u tayo xummaa oo uu Doolaal meesha ka jeediyey ayuu kaga hadlay wada hadalkii dhex maray Itoobiya iyo JWXO oo uu sida uu sheegay ay JWXO wax walba diiday. Hadalkii ay jeediyeen Qunsulka iyo Abdi iley ayaan jirin haba yaraatee wax muhimad ah oo lagala soo bixi karo oo ku saabsan ujeedadii shirka.
Dad ka qayb galay shirka oo aan waraysanay ayaa noo sheegay inaynan garanayn ujeedadii loogu yeedhay waxaanse u qaadanay mid ka mid jahawareerka iyo faragalinta joogtada ah ee ay Itoobiya ku hayso Soomaliya. Ganacstada Soomalida gaar ahaan shirkadaha xawiladaha ayaa la sheegay in loogu hanjabay in dhibaato ay soo gaadhi doonto ganacsigooda ka jira Geeska Afrika haddii ay shirk ka soo qaybgali waayaan.
Arrimaha kale ee keenay in Somalidu shirka tagaan ayaa ahayd iyadoo dad badan si been ah loogu sheegay in laga yaabo in la bixiyo baasaboorro. Dadwayne badan oo Imaaraadka ku dhaqan ayaa dhibaato ka haysataa xagga baasaboorada iyadoo baasaboorka Soomaliga ah aynan hay’ado badan oo dalkan ah aynan aqbalin.
Waxyaabaha ay ganacsatada Somalidu aad ula yaabeen ayuu yidhi Ceelaabe ayaa waxaa ka mid ahaa ninka lagu magaacbo Doolaal Aadan Dhegoole inuu ahaa ninka u xil saarnaa qaban-qaabada shirka gaar ahaan ganacsatada isla markaana bixinayay hanjabaadda ah in shirkaddii shirka iman wayda tallaabo laga qaadi doono. Doolaal ayaa muddo aan fogayn isla ganacsatadaa u sheegan jiray inuu taageersan yahay halganka lagu xoraynayo Ogaadenya uusana aqoonsanayn maamulka kililka.
Dad xog-ogaal u ah arimaha hoose ee Doolaal ayaa sheegaya inuu qaban-qaabada shirkan u isticmaalayo Doolaal olole uu ugu dhowaanayo dalwadda dhexe ee Itoobiya isla markaana uu ku caddaynayo inuu ka tanaasulay tuhunkii ay Itobiya ka qabtay ee ahaa inuu labada dhanba la shaqeeyo. Doolaal ayaa marka laga tago sheegashadiisa, aan wax lug ah ku lahayn halganka uu shacbiga Ogaadenya ku xoraynayo dalkiisa, hasa ahaatee kolba kooxda uu la fadhiyo jecel inuu isu ekeysiiyo.